Faa’idooyinka ay Leedahay Akhlaaqda Wanaagsan oo Ubadka La Baro |
Muslimo Cabdullaahi — April 3, 2019
Ubadkaaga in uu ahaado mid leh akhlaaq wanaagsan waa wax adiga ka waalid ahaan kuu wanaagsan ubadkana u wanaagsan. Qofka mar uu yahay mid akhlaaq wanaagsan waa qof ixtiraama waalidiintiis, waa mid ixtiraama bulshada midka yar iyo midka wayn. Taasi waxa ay u sahlaysaa in uu noqdo qof bulshada ku leh ixtiraam fara badan.
Ubadka marka uu yahay mid akhlaaq wanaagsan waa mid marna aan noqon mid ku caasiya waalidiintiisa.
Akhlaaq wanaaga iskama timaado inta badan waxa ay ku xerentahay sida ay waalidka usoo tarbiyeyaan ubadkooda. Ubadka goorta aad ku tarbiyeyso diinta islaamka, wax uu noqdaa mid akhlaaq wanaagsan leh. Kana illaali ubadka degaan leh dhaqamo xun-xun, sababtoo ah akhlaaqdiisa waxa ay ku yeelanaysaa saamayn aad iyo aad u wayn.
Akhlaaqda wanaaga ubadka faa’idadeeda waxaa ka mid ah wax ay ka ciyaartaa door wayn hormarka mustaqbalka ubadkaada. Qofka goorta uu leeyahay akhlaaq wanaagsan waa qof nolosha ka gaaro heer saro wanaagiisa uu kula dhaqmaayo bulshada awgeeda.
Akhlaaq wanaag kaliya ma dhaliso in ay noqdaan ubadka marka ay yaryihiin kuwa hadalkaada maqla ee waa kuwa markasta ku ixtiraama.
Ubadka marka uu yahay mid akhlaaq wanaagsan waxa ay ku saacidaa in uu noqdo mid ku wanaagsan waxbarshada. Sababtoo ah waxa uu noqdaa mid ixtiraama baryashiisa taasi ayaa sababtoo in uu noqdo arday wanaagsan oo aad loo jecel yahay, helana taageero badan oo dhanka barayaashiisa.
Wuxuu noqdaa mid ku samaysata goob walba asxaab wanaagsan. Wuxuu noqdaa arday aad iyo aad ay u jecelyihiin barayaashiisa iyo ardayda kale.
Marka uu waynaado waxa uu noqdaa mid shaqo wanaagsan hela, isla goortaasna goobaha shaqada mid aad looga jecelyahay noqda. Marka lees barbardhigo qof akhlaaq wanaagsan iyo qof aan la hayn akhlaaq wanagsan waxa inta badan la qataa shaqada qofka leh akhlaaq wanaagsan leh. Si kasto ay ahaato akhlaaq wanaaga faa’idadeeda way tiro badan tahay waxa ayna wax tartaa ubadka da’a walbo oo ay marayaan. Bar ubadkaada akhlaaq wanaagsan si uu wax kugu tara naftiisana u wax u tara.
Akhlaaq wanaaga qofka wax ay ku haktaa in uu sameeyo wax wanagsan uu Alle raali kayahay. Sidoo kale waa qof wanaagsan oo dadka kula dhaqma dabeecad wanagsan iyo si kala gacay leh. Bulshada waa qof ku dadaalo in wax ku soo biiriye. Faa’idooyin tiro badan ayey leedahay in uu ahaado ubadka mid akhlaaq wanagsan oo aan halkaan ku soo koobi karin.
Qarnigaan la jooga waxaa dhaca wax yaabo badan oo saamayn ku yeesha ubadka akhlaaqdooda, waa arin u baahan taxadar fara badan. Ubadkaada in uu barta diinta Islaamka kaliya ma’ahan akhlaaq wanaga, ee waa in uu ahaadaa mid ku dhaqma diinta Allane kala dhaxeeyo xirriir wanaagsan. Sidoo kalana waa in uu ubadka wanaajiyaa xirririka kala dhaxeeyo bulshada qaybaheeda kale.
Bar ubadkaada ahmiyada ay leedahay akhlaaq wanaaga si ay u bartaan uguna dhaqmaan. Waxaa loo bahanyahay in ay waalidiin si fican oo akhlaaq wanaagsan leh iskula dhaqmaan, waayo ubadka waxa ay ku daydaan inta badan waalidkooda. Barista akhlaaqda wanaaga ma’ahan wax afka laga sheega, ee waa wax u baahan in ay kaga daydaan ubadka ficil samayn wanaagsan oo waalidiinta iyo bulshada ka dhaxayso.
Tags: Faa’idooyinka ay Leedahay Akhlaaqda Wanaagsan oo Ubadka La Baro
Next post Xalka Geeska Afrika Waa Nabad, Horumar iyo Iskaashi
Previous post Barnaamijkii Xujeyda Siyaasiyiinta Soomaaliyeed